!! #ဦးစိုးမြင့်ထွန်း #NLD #အလှပြ လှုံ့ဆော်ရေး #ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်း | democracy for burma
!! #ဦးစိုးမြင့်ထွန်း #NLD #အလှပြ လှုံ့ဆော်ရေး #ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်း
tags: ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်း, ဦးစိုးမြင့်ထွန်း NLD အလှပြ လှုံ့ဆော်ရေး, Burma, cardiac, DIED, Election, Myanmar, RIP
မြင်းမူမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁
ဦးစိုးမြင့်ထွန်း NLD အလှပြ လှုံ့ဆော်ရေး
Credit . Minthet kha
“မြင်းမူမြို့နယ် ဒီချုပ်အမတ်လောင်းတစ်ဦး မဲဆွယ်နေစဉ် နှလုံးရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်”
မြင်းမူမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းဦးစိုးမြင့်သည့် နိုဝင်ဘာလ၆ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂နာရီအချိန်ခန့် တွင်မြင်းမူမြို့ ဈေးဒေါင့်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးနေ စဉ်နှလုံးရောဂါကြောင့်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွား ခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ သိရသည်။
မြင်းမူမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမြင့်သည် ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက်
၅၃နှစ်အရွယ် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒီနေ့(နိုဝင်ဘာ၆ရက်) ၁၂နာရီခန့်က ဦးစိုးမြင့်ကွယ်လွန်သွား တာပါ။ မြင်းမူမြို့ပေါ် ဈေးဒေါင့်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်နေ ရင်း နှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန် သွားတာပါ။ဆေးရုံမှာ ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် အရ နှလုံးမှာ အဆီဖုံးနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။”ဟုမြင်းမူမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးစိုးစံသက်ထွန်းက ပြောသည်။
from → ဦးစိုးမြင့်ထွန်း NLD အလှပြ လှုံ့ဆော်ရေး, Burma, elecion, MYANMAR
← #အမျိုးသား #ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ တင်ပြချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းချက်●
#MYANMAR #ELECTION #monitoring #ballots #unsealed #missing #SNLD #MON →